कहाँ चुक्यो भिलेन ? - चलचित्र - साप्ताहिक
छक्का–पञ्जाको व्यवसायिक सफलतासँगै अहिले नेपालमा कमेडी चलचित्रको ओइरो लागेको छ । पछिल्लो समय प्रदर्शन हुने अधिकांश चलचित्र हास्य विधामै केन्द्रित भएर निर्माण भैरहेका छन् । कमेडी चलचित्र धमाधम आइरहेका बेला एक्सन स्टार अभिनेता निखिल उप्रेतीको चलचित्र ‘भिलेन’ गत साता प्रदर्शन भयो । यद्यपि यो चलचित्र दुईदिन पनि हलमा टिक्न सकेन ।
यसका पछाडि विभिन्न कारण होलान् तर चलचित्र हेर्ने अधिकांश दर्शकले सहजै महसुस गर्छन्, चलचित्रमा कलात्मकता र नवीनताको खडेरी छ । अहिले चलेको ट्रेड विपरीत यो चलचित्रमा निखिलले आफ्नो पुरानै रङ थोपरेर पन्छिने काम गरेका छन् ।
भिलेनको कथा मधेस केन्द्रित छ जहाँ मधेसको समाजलाई हल्का रूपमा चित्रण गरिएको छ । अहिलेको मधेस पुरानै मधेस होइन, त्यहाँ धेरै कुरा परिवर्तन भैसकेको छ । यहीँनिर चुकेको छ चलचित्र । मधेसको कानुन दैवले जानुन् । हिरा सिंह चौधरीले भनेको सबैले मानून् ! हिरा सिंह मधेसका मुखिया जस्ता हुन, जसले भनेको सबैले मान्नुपर्छ । गाउँमा केही कामको सुरुवात गर्दादेखि हरेक कुरामा उनैसँग सल्लाह लिनुपर्छ । कसैले उनको भनाइविपरीत काम गर्‍यो भने सिंहको चित्त बुझ्दैन ।
सोही स्थानमा अलिकति फरक सोच भएका र दु:खी तथा अन्यायमा परेकाहरूका सहयोगी निखिल र हिरा सिंहको झगडा र रोनाधोनामै चलचित्र अघि बढेको छ । यो किसिमका चलचित्र पहिले पनि आएका हुन्, भिलेन पनि त्यसकै अर्को एउटा कडी मात्र हो ।
निखिललाई पुरानै किसिमले पर्दामा एक्सन हिरोका रूपमा देखाउन खोजिएको छ । उनको लुक्स र अभिनयमा कुनै नयाँपन पाइँदैन । समग्र चलचित्र अनेक कोणबाट दयनीय देखिन्छ । चलचित्रमा के देखाउन खोजिएको हो भन्ने विषयमा निर्देशक देवेन्द्र पाण्डे स्पष्ट छैनन् । अहिले मधेस र पहाडले एकले अर्कालाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो कुराको छनक यो चलचित्रमा कधहीँं कतै पाइँदैन । मधेसकी युवतीलाई पहाडका युवाले घर भित्र्याउँदा मधेस र पहाडको दृष्टिकोणको खाडल पुरिन्थ्यो कि † चलचित्रमा मधेसकी एक युवतीलाई पहाडका एक युवकले मन पराउँछन् र उनीहरू प्रेममा पर्छन् । तर, युवतीको घरमा पहाडे युवकलाई मन रुचाइँदैन । ती युवक आफ्नी प्रेमिका ‘शिल्पा पोखरेल’ लाई लिएर भाग्छन्, तर उनीहरूलाई रोक्न आइपुग्छन् प्रेमिकाका आफन्तहरू ।
चलचित्रको राम्रो पक्ष भनेको यसको सम्पादन हो । यसमा मिलन श्रेष्ठ र शाहिल खान केही हदसम्म सफल छन् । मदन काश्यप घिमिरे र सौरभ लामाको क्यामेरा वर्क पनि राम्रो छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने निर्देशकीय पाटो र कथा लेखक मौनता श्रेष्ठको लापरवाहीका कारण चलचित्रले अब्बल बन्न सक्ने सम्भावनालाई आफैंले तुहाएको छ ।